Meghan oo codsi u gudbisay qoyska boqortooyada - Muraayad
Home Nolosha Meghan oo codsi u gudbisay qoyska boqortooyada
Meghan oo codsi u gudbisay qoyska boqortooyada
Mehgan ayaa dhawaan sheegtay in ay ku fakartay inay isdisho
Harry iyo Meghan ayaa wareysi xasaasi ah siiyay Oprah | Image Credit: Getty Images
Isbuucyadii lasoo dhaafay waxaa sii xoogeysanayay wararka ku saabsan qoyska boqotooyada Ingiriisya, sheekooyinka inta badanna waxay ku hareereysan yihiin Amiir Harry iyo xaaskiisa Meghan.
Meghan Markle ayaa xiriir la sameysay qasriga boqortooyada ee Buckingham iyadoo ka dalbatay in ay aragto email-lada, dukumiintiyada ama farriimaha qoraalka ee la xiriira cabasho iyada ka dhan ah oo ku saabsan in ay dhibaato u geysatay dad ku dhex jira boqortooyada.
Xub sare oo ka tirsan dadka ka howl gala qasriga ayaa warbaahinta u sheegay in xaaska Amiir Harry ay dalabkan u gudbisay qoyska boqortooyada si ay u aragto caddeymaha muujinaya eedeymaha loo jeediyay dhawaan.
Tallaabadan ayaa lagu tilmaamay mid caddeyneysa in Mehgan ay damacsan tahay dagaal isdifaacitaan ah oo ay la gasho qoyska boqortooyada.
Waxaa lagu soo warramay in boqoradda ay codsigaas u sii gudbisay Amiirka Wales, Charles, kaasoo howl-wadeennadiisa ay hadda raadinayaan xogta la soo dalbaday.
Eedeymahan ayaa soo baxay kaddib markii labo xubnood oo ka mid ah shaqaalaha qasriga ay sheegeen in ay dhibaato kala kulmeen Meghan. Shaqaale hore ayaa sidoo kale sheegay in Mehgan ay si xun u bahdishay. Durbadiiba boqortooyada waxay billowday baaritaanno la xiriira arrintan.
Warkan ayaa daba socday wareysi ay Meghan iyo Harry dhawaan siiyeen Oprah oo ay shaaca uga qaadeen arrimo xasaasi ah oo ka dhan ah boqortooyada ingiriiska.
Mehgan ayaa wareysigaas ku sheegtay in boqortooyada dhexdeeda ay kula kulantay cunsuriyad kaddib markii walaac laga muujiyay sida uu u madoobaan karo midabka maqaarka cunugeeda, xilligii ay uurkiisa lahayd.
Xaaska Amiir Harry ayaa sheegtay in markii ay arrintaas la kulantay ay damacday in ay isdisho. Goor dambe Oprah waxay sheegtay in Harry uu xaqiijiyay in ayeeyadiis – oo ah boqoradda – iyo seygeeda oo isagana awowgiis ah aysan labaduba ka mid ahayn dadka cunsuriyadda ku sameeyay.
Previous articleWadnahaaga halis ayuu ku jiraa haddii arrintan aadan ku sameen karin 90 il biriqsi
Next article6 sabab oo dumarku ay u jecel yihiin inay guursadaan nin ka yar